Maitiro Ekugadzira Inogovana Zvemukati | Martech Zone
Maitiro Ekugadzira Anogovana Zvemukati
Svondo, Gunyana 6, 2015 Svondo, Gunyana 6, 2015 Douglas Karr
Sekureva kweThe New York Times Mutengi Insight Boka mune nyowani pepa, Iyo Psychology yekugovana, pane zvikonzero zvishanu zvakakosha nei vanhu vachigovana online:
ukoshi - Kuunza zvakakosha uye kudzidzisa zvemukati kune vamwe
kuzivikanzwa zvauri - Kuzvitsanangura kune vamwe
Network - Kukura nekusimbisa hukama hwedu
Kupindira - Kuzvizadzisa-kwako, kukosha uye kubatikana munyika
Zvinokonzera - Kuparadzira izwi kunze nezvezvikonzero kana mabhureki
Iyo New York Times mushumo ndeyekutsvagisa kwakanaka uye inokweretesa pabasa ratinoita pano paMartech. Tichiri kuita mari kutsikisa kwedu, saiti yacho pachayo haina kuzviriritira (kunyangwe tiri kusvika ikoko). Martech Zone inopa vatungamiriri vedu vanotungamira. Kushambadzira Tekinoroji, Kutengesa Tekinoroji uye Online Technology makambani anouya kwatiri kuzovaka yavo yewebhu kuvapo uye kukura yavo yemusika mugove. Ivo vanoita izvo nekuda kweiyo hwaro hwekuvimba uye kukosha kwatakapa kuburikidza nezvinyorwa zvedu pano.
Isu takasarudzika nezve zvemukati izvo isu zvatinosarudza kunyora uye kugovana nezvazvo uye kushandira kuti tiite zvakawanda zvacho zvinogovaniswa zvemukati. Isu tinobata sei masosi (senge zvakawanikwa neNew York Times), tinyore zvirimo, uye tigoita kuti zvigovane?
chikwiriro - Tisati tatanga kunyora, takave nechokwadi chekuti saiti yedu inotsigira kugovana. Mifananidzo yakaratidzwa uye zvakapfuma zvimisikidzo zvinoita kuti zvinyorwa zvedu zvigadziriswe kugovana munharaunda. Kupotsa hwaro uhwu kunogona kukanganisa kunyange zvemukati zvirinani kubva mukugovaniswa. Hapana anoda kuzviita basa pakugovana zvako zvemukati. Ita kuti zvive nyore.
Misoro Inokakavara - Dhata ine nharo, rants, uye kumisa zvisirizvo zvakagovaniswa pamusoro pevhareji. Idzo nharo dzinopokana dzinowanzoisa mukutipesana nevatungamiriri vemaindasitiri asi kuwana ruremekedzo rwevezera rako uye vanogona vatengi.
Pfuma Mifananidzo - Kuwedzera chifananidzo chinopenda chakanakisa mufananidzo mundangariro dzeumwe munhu. Tarisa uone iwo mufananidzo watakavakira iyi posvo. Iyo inopenda pikicha yakajeka inotyaira kuda kuziva uye inopa kwainoenda muchiitiko icho chinoita kunze uko pasina chinongedzo.
Inogutsa Zvemukati - Kana Google ikazivisa shanduko yakakosha inogona kukanganisa vaverengi vedu, tinogovana mhinduro yekuchengeta vaverengi vedu pamberi penzvimbo. Isu hatigovane indasitiri nhau senge mari dzekudyara, chinzvimbo chinzvimbo, kana kubatanidzwa izvo zvisina kukanganisa vaverengi vedu.
Inokosha Zvemukati - Kana zvemukati zvichigona kuwedzera kudzoka kwako mukudyara kana kudzikisira mari yako, isu tinoda kugovana iyo mhinduro kana chigadzirwa. Izvi zvinogovaniswa zvemukati zvinotyaira tani yekushanya kubhuku redu.
kuwanikidza - Isu tinogovana zviono zvekutengesa nekutengesa zvine chekuita nehunyanzvi vhiki rega rega pane yekushambadzira tekinoroji blog kuitira kuti iwe ugone kuziva kuti kune mhinduro kunze uko dzakavakirwa zvakanangana nematambudziko esangano rako Kuziva aya maapplication kwakaita kuti isu ive yakakurumbira sosi yemasangano, kushambadzira uye madhipatimendi ekutengesa.
dzidzo - Hazvina kukwana kuseka mhinduro, isu tinogara tichiedza kuputira chero zviwanikwa nezano rekuti vaverengi vedu vabudirire. Zvemukati zvinoita kuti hupenyu hwavo huve nyore zvinogoverwa. Zano rakakura risingatore mari rinonetsa kuwana mazuva ano!
Yedu tagline ndeye Tsvagiridzo, Tsvaga, Dzidza uye izvo zvinangwa zvinotyaira kugovana zvemukati medu. Kusvika kwedu kunoramba kuchikura zvakapetwa kaviri pasina kubhadhara mari yekusimudzira - nhamba inoyevedza. Ehezve, zvakatitorera makore gumi kudzidza aya marongero. Uye zvechokwadi - tinovagovana newe vaverengi vedu! Tinoda kuti ubudirire.
Inzwa wakasununguka kugovana mufananidzo watakagadzira kuratidza nei vanhu vachikurudzirwa kugovana online:
8 Mifananidzo Pfungwa Ekushambadzira Bhizinesi rako pa Instagram
Apr 26, 2016 pa 1: 44 AM
Ndakatanga kuverenga izvi ndisingasvetuke zvakanyanya asi ini ndawana zvakawanda kupfuura zvandaitarisira. Zviri nyore uye zvine simba mazano pano. Ndatenda. Ndinovimba ndinokwanisa kutevera zvimwe zveizvi 🙂